बुद्धको पाईला जसले सेयर गर्छ उसलाई ७ दिन भित्रै निकै ठूलो खुसीको खबर प्राप्त हुनेछ!ॐ: लेखि सेयर गर्नुहोस् मनोकामना पुरा हुनेछ ! – Khoj Dainik
September 13, 2021 September 13, 2021 adminLeaveaComment on बुद्धको पाईला जसले सेयर गर्छ उसलाई ७ दिन भित्रै निकै ठूलो खुसीको खबर प्राप्त हुनेछ!ॐ: लेखि सेयर गर्नुहोस् मनोकामना पुरा हुनेछ !
र आफ्नो जन्मदिनमा आमालाई विशेस पुजाआजा गरि श्रदाभक्ति सहित उपहार दिन्छन । आमाले दुइ सन्तान जन्मायर मातातिर्थऔंसी बाहेकै दुइ पटक आमा बनेको पिडालाई भुल्ने अवसर पाउछिन । आमाका जति छोरा छोरी छन् उति उतिनै पटक उनले आमा बनेको गौरब र गर्वलाई आत्मसाथ गर्न
पाउछिन्रआमा शब्द उच्चारण गर्दा, सुन्दा जति सुन्दर र आनन्द लाग्छ त्यसको गरिमा र महिमा पनि त्यतिनै अपार छ ।
आमा हुदाका कष्ट सब्दमा बयान गर्न सकिदैन । यं मातापितरौ क्लेशं सहेते सम्भवे नृणाम् । न तस्य निष्कृतिस्शक्या कर्तु वर्षशतैरपि ।आमा बुवालाई बालक जन्माउन एवम पालन पोषण गर्नमा जति क्लेश (दर्द ) सहनुपर्छ त्यसको ॠण चुक्ता गर्नका लागि बालकले संयौ बर्स सेवा गरेपनि तिर्न सक्दैनौ । जनि प्रादुभावे धातुबाट जन्म सब्दको निर्माण हुन्छ । जायते इति जन्म अर्थात आकार,स्वरुपमा आउनु वा प्राप्त हुनुलाई जन्म भनिन्छ । जसमा जन्माउन सक्ने सक्तिछ त्यसलाई जननी वा आमा भनिन्छ । आकाशलाई बुबा र पिर्थ्बीलाई आमा भनिन्छ ।
देवीदेवताको दर्शन,प्राथना-स्तुतिगान गर्ने, दिन दुखि लाई दान दिने कार्य गरि पवित्र र आनन्दित बन्ने प्रयास गरिन्छ । सामुहिक भेटघाट गरेर खुसि बाडिन्छ, आशिर्बाद लिईन्छ र असल जीवन जिउने जीवन बिताउने दृढ संकल्प गरिन्छ। यस दिनका कार्यले बर्ष भरि उर्जा दिनेहुनाले शुभ र असल कार्यमा ध्यान दिईन्छ ।भिडियो हेर्नुहोस।
के तपाईंलाई थाहा छ ? किन च र्चित छ श्रीरामले शबरीको जुठो ब यर खाएको प्रसंग ?
खुसिको खबर : ५ हजार वर्ष पुरानो गणेशको मुर्ति फेला पर्यो, बेवास्ता नगर्नुहोला नत्र हानी होला ॐ लेखि सेयर गरौं